के तपाइँलाई पेट अपचको समस्या छ ? समधान यसरी गर्नुहोस । – Tudikhel – Nepal's Popular Digital NewsPaper
के तपाइँलाई पेट अपचको समस्या छ ? समधान यसरी गर्नुहोस ।
सबैभन्दा बढी सताएको समस्या भनेको पेटकै हो । पेटको समस्या उत्पन्न हुनुमा मुख्यत: कुनै बेला उपवासको नाममा भोक-भोकै बस्नु र कुनै बेला बेस्सरी खानु पनि मुख्य कारक हो ।
अपच हुनाका कारण :
– खाना छिटो-छिटो नखाने र वीच-वीचमा पानी पनि नपिउने
Published On: Thursday, June 6, 2019 Time : 7:32:58 143पटक हेरिएको